Barcelona oo gaartay guusheeda ugu horeysay ee La Liga xili ciyaareedkan, kaddib markii ay si awood leh kaga adkaatay Real Betis… + SAWIRRO – Gool FM
(Catalonia) 25 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guusheedii ugu horeysay xili ciyaareedkan ee horyaalka La Liga ku gaartay garoonkeeda Camp Nou, kaddib markii ay 5-2 kaga adkaatay naadiga Real Betis.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala baxay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 15-aad xiddiga reer France ee Nabil Fekir ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Real Betis oo marti ku aheyd caawa garoonka Camp Nou, wuxuuna ka dhigay 1-0, kaddib baas qurux badan uu ka helay saaxiibkiis Loren Moron.
Laakiin daqiiqadii 41-aad Antoine Griezmann ayaa goolka barbaraha u dhaliyay Barcelona, waxaana goolkan si qurux badan kaga caawiyay Sergi Roberto, dheesha ayana sidaas ku noqotay barbaro 1-1 ah.
Marka dib leysugu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta labada kooxoodba waxay sameeyeen fursado halis ah ee goolal loo filan karay, iyadoo Real Betis ay iska caabin xoogan kala hortagtay Blaugrana.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Antoine Griezmann ayaa daqiiqadii 50-aad wuxuu dheesha ka dhigay 2-1, waxaana markale goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Sergi Roberto.
Markale Barcelona ayaa sii dheereysatay hogaanka ciyaarta daqiiqadii 56-aad, waxaana 3-1 ka dhigay Carles Perez, waxaana caawinta goolkan lahaa laacibka reer Portugal ee Nelson Semedo
60 daqiiqo Jordi Alba ayaa si toos ah u niyad jabiyay taageerayaasha Real Betis, kaddib markii uu ciyaarta ka dhigay 4-1, waxaana goolkan ka caawiyay Sergio Busquets.
Arturo Vidal oo caawin qurux badan ka helay saaxiibkiis Griezmann ayaa daqiiqadii 77-aad wuxuu dheesha ka dhigay 5-1.
Laakiin xiddiga kooxda Real Betis ee Loren Moron ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 5-2.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 5-2 ay ku adkaatay kooxda Barcelona waxayna heleen saddexdooda dhibcood ugu horeysay horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan.
Valverde oo ka hadlay guushii weyneyd ay xalay ka gaareen Real Betis, muxuuse ka yiri xiddigaha Messi, Rakitić iyo Griezmann?